सूर्य नमस्कार गर्दा हुने यी फाइदा, कुन समयमा गर्ने ? - Jananigrani News
प्रकाशित मितिः ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १२:१८
तपाईं निरोगी बन्न चाहनुहुन्छ ? तन्दुरुस्त रहन चाहनुहुन्छ ? दिनभर ताजा महसुष गर्न चहनुहुन्छ ? शरीर लचकदार बनाउन चाहनुहुन्छ ?
त्यसो हो भने, एउटा उपाय छ । उपाय सजिलो छ । सूर्य नमस्कार ।
सूर्य हामीलाई थाहा छ । नमस्कार पनि थाहा छ । दिनदिनै हामी कति जनालाई नमस्ते टक्र्याउँछौं । कतिको नमस्ते पनि स्विकार गर्छौं । तर, सूर्य नमस्कार एक योगासन हो । यसको विधी अलि भिन्न छ ।
शरीर यसरी रोगको भण्डार
विश्व समुदाय अहिले सबैभन्दा स्वस्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । गर्भबाटै रोग बोकेर आइरहेका छन् । हरेकको घरमा रोगी छन् । रोगै रोगको कारण जीवन मरेतुल्य छ । दिनदिनै औषधी सेवन गर्नुपर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनुपर्ने, उपचार खोज्नुपर्ने वाध्यतामा गुजि्ररहेको छ हाम्रो दैनिकी ।
किनभने, अहिले हामीले बाँच्ने संसार कृतिम छ । हामीले शुद्ध हावा लिन पाइरहेका छैनौं । जैविक खानेकुरा सेवन गर्न पाइरहेका छैनौं । हामीले फेर्ने सास दुषित छ । हामीले खाने खानेकुरा विषाक्ता छ । त्यसमाथि हामी भौतिक सुख सयलमा लिप्त भएका छौं । यही कारण हामी गर्भदेखि नै रोग बोकेर जन्मिएका छौं । रोगै रोगले ग्रस्त छौं ।
यसरी रोगको संक्रमणले ग्रस्त हामीलाई त्यसबाट उन्मुक्त भएर रोगमुक्त जीवन बाँच्नका लागि योग सर्वोत्तम विकल्प हो । योगको सबैभन्दा प्रशिद्ध आसन हो, सूर्य नमस्कार ।
सूर्यनमस्कार आसनको केही स्वास्थ्यवर्द्धक लाभ हुन्छ । जस्तो कि यसले रक्तप्रवाह सही ढंगले गराउँछ । पाचन क्रिय चुस्त रहन्छ । तौल नियन्त्रण गर्छ । शरीरमा सकारात्मक उर्जा पनि मिल्छ ।
सूर्य नमस्कार धिमा गतिमा गर्नुपर्छ । र, आफ्नो मुद्रालाई परफेक्ट राख्ने प्रयास गरौं । यसका साथै सूर्य नमस्कारको १२ मुद्रा गर्नु लाभदायक हुन्छ । सूर्य नमस्कारभन्दा अघि वार्मअप गर्नु राम्रो हो । यसले शरीरलाई थप लचिलो बनाउँछ ।